Soosaaraha Ugu Wanaagsan ee EPE iyo Warshad | Yilibao
Waa hab wanaagsan oo lagu kobciyo wax soo saarkeena iyo xalka iyo dayactirka. Hadafkeenu waa had iyo jeer in aan abuurno badeecado farshaxan iyo xalal macaamiisha leh khibrad aad u wanaagsan oo ku saabsan Isbeddelka Alaabooyinka Isku Laabista Ciyaarta Qiimaha Qiimaha Jaban ee Lagu Sameeyo Warshadda Shiinaha, Waxaan si buuxda u soo dhaweyneynaa macaamiisha ka kala socda adduunka oo idil si loo go'aamiyo cilaaqaadka shirkadda ee aaminka ah iyo labada dhinacba leh. in la helo mustaqbal ifaya wadajir.
Hal-abuurnimo isdaba-joog ah, waxaan kuu soo bandhigi doonnaa agabyo iyo adeegyo aad u qiimo badan, waxaan sidoo kale gacan ka geysaneynaa horumarinta warshadaha sariirta ee gudaha iyo dibaddaba. Ganacsatada gudaha iyo ajaanibta labadaba si xoogan ayaa loo soo dhaweynayaa si ay noogu soo biiraan si aan u wada korno.
Waxyaabaha loo yaqaan 'EPE' waa shey cusub oo xumbo deegaanka u wanaagsan lehna barkin adag oo adag iyo iska caabin naxdin leh.
Waa jilicsan, iftiin, iyo laastik. Waxay nuugi kartaa oo kala firdhin kartaa saameynta dibedda iyada oo loo laabayo si loo gaaro saameyn barkimo.
Ka gudub cilladaha 'styrofoam' caadiga ah ee jilicsan, (marka loo eego) qaab-liita iyo liita soo-kabashada.
Isla mar ahaantaana, EPE waxay leedahay astaamo adeegsi oo taxane ah sida ilaalinta kuleylka, iska caabbinta qoyaanka, kuleylka kuleylka, kuleylka kuleylka, ka hortagga jahwareerka, gabowga, iyo u adkeysiga daxalka.
Xakamee jaangooyada faahfaahinta, ku muuji awoodda tayada. "Ururkeennu wuxuu ku dadaalay inuu dhiso koox tayo sare leh oo xasilloon oo shaqaale ah waxayna sahamisay hab tayo sare leh oo amar ah oo loogu talagalay Qiimaha Qiimaha Jaban ee Shiinaha Sare ee Tayada Sare ee Fudud Fududeynta Joodariga Isku Laablaabi Kara Hurdada Hurdada. Mat, Nidaamkeenna aadka u gaarka ah ee takhasuska leh ayaa baabi'inaya qayb ka mid ah fashilka waxayna u soo bandhigaysaa dukaamadeena kala-soocidda tayada sare leh, taas oo noo oggolaaneysa inaan xakameyno kharashka, qorsheyno awoodda iyo inaan si joogto ah u wadno bixinta waqtiga.
Liiska Qiimaha Jaban ee Shiinaha Xumbo Play Mat qiimaha, Kooxdayada khibradda injineernimada guud ahaan waxay diyaar u yihiin inay kuu adeegaan latashiga iyo jawaab celinta. Waxaan sidoo kale awoodnaa inaan ku siino shaybaarro lacag la'aan ah si aad ula kulanto shuruudahaaga. Dadaallada ugu wanaagsan ayaa laga yaabaa in la soo saaro si ay kuu siiyaan adeegga ugu fiican iyo badeecada. Markaad xiisaynayso ganacsigeenna iyo alaabteenna, hubi inaad nala hadasho adigoo noo soo diraya emayl ama si dhakhso leh noo soo wac. Si aad u ogaatid badeecadeena iyo shirkad dheeri ah, waxaad u imaan kartaa warshadeena si aad u daawato. Waxaan guud ahaan ku soo dhaweyn doonnaa martida adduunka oo dhan ganacsigeenna si aan xiriir ganacsi ula abuurno.
Hore: 3D Waraaq
Xiga: TPU Gogosha Mat